एक प्रिय जोन पत्र नाईस, Google भएको थियो! | Martech Zone
एक प्रिय जोन पत्र नाईस भएको थियो, गूगल!
बुधबार, अक्टोबर 27, 2010 बुधबार, अक्टोबर 29, 2014 Douglas Karr
यो हप्ता, हाम्रो डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगिging साइट गुगलको अदृश्य भयो।
म कठोर कुनै काम गर्न चाहन्न, त्यसैले म एक दिन पर्खें। लामो स्वास। अझै केहि छैन।
त्यो त्यस्तो बेला हो जब मलाई लेखमा स pointed्केत गरिएको थियो गुगलले केहि परीक्षण गरिरहेको हुन सक्छ र एल्गोरिथ्म परिवर्तन कुनाको वरिपरि हुन सक्छ। केही साइटहरूले तिनीहरूको श्रेणीमा केही कठोर परिवर्तनहरू देखेका थिए।
ठूलो शक्ति संग ठूलो जिम्मेवारी आउँछ। मलाई थाहा छ यो एउटा चलचित्रको मात्र हो, तर geez Google। यो निकै खराब हो मैले मेरो साइटहरू उठेको र खस्केको, मुद्दाहरू पहिचान गर्न, परिवर्तन गर्न, तिनीहरूलाई लोकप्रिय राख्न र राम्रोसँग राख्ने संघर्ष गर्दैछु। किनकि मेरो पुस्तकले खोज इञ्जिन अनुकूलनलाई अझ मजबुत गर्दछ, यो मात्र विश्वसनीय छ कि मेरो साइटले अरूलाई सौंपाउँदछ। अर्को शब्दहरु मा, मेरो सफलता तपाईको स्थिरता र प्रासंगिक यातायात को गुणवत्ता मा आधारित छ तपाइँ मेरो दिशा मा कदम।
संक्षेपमा, गुगल, हामी यहाँ एक भारी सम्बन्ध मा छौं। मलाई तिम्रो खाँचो छ। तपाइँले सोध्नु भएको सबै म गर्छु ... मेरो साइटलाई अप्टिमाइज गर्नुहोस्, वेबमास्टरहरूसँग दर्ता गर्नुहोस्, कुञ्जी शब्दहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। मँ केहि गर्दिनँ तर तपाईं दिनहुँ खुशी पार्नुहुन्छ ... तपाईंको आगन्तुकहरूलाई टन्न र सामग्रीको टनको साथ स providing्केत गर्दै। बदलामा म के पाउँछु?
तिमीले मलाई छोड्यौ।
एक नोट को रूप मा यति धेरै बिना।
जे होस् मसँग वेबमास्टर्समा कुनै सूचना छैन, मैले साइटमा केही चिमटाएँ र पुन: अनुरोधको लागि अनुरोध गरें। केवल एक चीज मैले मात्र पाउन सक्दछु कि मलाई सम्भवतः समस्यामा परेको हुन सक्छ हेडरमा कुञ्जी शब्द थियो जुन प्रदर्शित थिएन (छवि यसको ठाउँमा थियो) ... त्यसैले मैले यसलाई हटाएँ। मलाई लाग्दैन कि त्यो तपाईंको लागि मलाई छोड्ने पर्याप्त हुन्छ, तर कसले जान्दछ। तपाईं मलाई भन्नुहुन्न।
आज, हामी खुशी छौं कि हामी पछाडि क्रममा फर्केका छौं। विडम्बनाको कुरा, म दर्जन दर्ताको लागि वर्गीकरण गरिरहेको छैन कि यति कुञ्जी शव्दहरू मैले पहिले गर्थे, तर म श्रेणीकरण गर्दैछु # 1 डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि forको लागि - अमेजन र विली भन्दा अगाडि। मलाई लाग्दैन कि उनीहरूको लोकप्रियता र ब्याकलिks्क सम्भव छ ... तर हे। म जे लिन सक्छु लिन्छु।
जे भए पनि, म अझै गुगलमा ब्रेक गर्न तयार छैन। हेरचाहको लागि धन्यवाद। अर्को पटक मलाई एक प्रिय जोन पत्र पठाउनुहोस्, यद्यपि। यो न्यूनतम तपाईंले यो सम्बन्धमा लगानी गरेको सबैका लागि गर्न सक्नुहुन्छ।
टैग: डि-अनुक्रमितगुगल वेबमास्टरहरूGoogle +खोज इञ्जिन मार्केटिंगएसईओ
नयाँ वेबसाइट, दोस्रो लिनुहोस्
अब इन्डी लेख्नुहोस्
उत्कृष्ट पोस्ट डग। धेरै रचनात्मक वास्तवमा मैले DirecTV लाई केहि महिना अघि लेखेको थिएँ, सम्बन्ध मात्र बिच्छेद गर्ने मात्र म थिए (मैले उपग्रह संकेत पाउन सक्दिन)। http://writenowindy.blogspot.com/2010/08/i-want-you-back-too-directv-but-we-just.html
पत्र अवधारणा निजी ग्राहकहरु लाई आफ्नो ग्राहकहरु / प्रयोगकर्ताहरु संग हुन सक्छ व्यक्तिगत सम्बन्ध हाइलाइट गर्न एक उत्तम तरिका हो।
मलाई लाग्छ कि यो खोजी ईन्जिन भूमि हो जुन गुगलले अभिनय ग्लिचिटीको रिपोर्ट गर्‍यो (उनीहरूको ब्लगमा गहिराइ पढ्न प्रीमियम सदस्यता छैन)। यो सिर्फ एक सेकेन्ड पहिले गरेको थियो।
र अर्को पटक, सम्पूर्ण पृष्ठ एक सर्प देखाउनुहोस् ताकि मेरो सानो पूर्व समीक्षा shows JK देखा पर्नेछ।
आफैंलाई नोट गर्नुहोस् - अफसाइटले मेरो पूर्व समीक्षालाई अनुकूलन गर्दै (अन्तमा)
PS - गुगल नृत्य को फिर्ती?
मैले मेरो साइटम्यापमा नयाँ पृष्ठ थपें, अन्य दर्जनौं भन्दा बढि कुनै परिवर्तन भएन, र मैले सुरु गरेको ठाउँमा बिस्तारै बिस्तार हुनुभन्दा केही दिनको लागि उनीहरूले मलाई3स्थलहरू गिराए। Mistrustful, methinks।
यसले SEO को टोकरीमा सबैको अण्डा राख्ने समस्यालाई मात्र औंल्याउँछ। मलाई याद छ केही वर्ष अघि सँगीसँग बहस भइरहेको थियो जसले मलाई खराब सल्लाह दिइरहेको थिएँ जब मैले उनीहरूलाई विज्ञापन, ट्रेड लि links्क किन्नुपर्‍यो र सर्च इन्जिनहरूमा भर पर्नुका साथै यातायात पाउन हामीले अरू सबै कुरा पनि गर्नुपर्‍यो भनेर भने। जब उनीहरूले गर्नुपर्ने सबै SEO जान्नु थियो। उसले आफूलाई उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्‍यो किनकि उनले आफैंलाई एसईओ विज्ञ मान्दछ र ईकमर्स साइटहरूको एक जोडीबाट वर्षमा केही सयौं भव्य बनाउँदछ र सर्च इन्जिनबाट सबै ट्राफिक प्राप्त गर्‍यो र प्रायः गुगलबाट। केहि महिना पछि Google नाच्यो, उसको श्रेणीकरण हरायो र उसको व्यवसाय ट्याked्क भयो।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि म inferring होइन कि तपाईं केवल SEO मा निर्भर हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जो गर्छन्।
अक्टुबर २,, २०१० :28: १ AM बिहान, "इको"
हग, म अधिक सहमत गर्न सक्दिन। कुनै व्यवसाय संग एकल अधिग्रहण रणनीति हुनु हुँदैन!
अक्टूबर २१, २०१ at २:०29 बिहान
जब मलाई लाग्छ कि बर्षौं पहिले माइक्रोसफ्ट विन्डोजको साथ एक्सप्लोरर बन्डलिंगको लागि मुद्दा हालेको थियो। धेरै शक्ति तिनीहरूले त्यसपछि भने…
फरक समय, फरक मानसिकता मेरो अनुमान
ज्याक, तपाईबाट सुन्न पाएको महोदय! हो, म पूर्ण रूपमा सहमत छु। बैंक र क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूलाई व्यवसायमा दफन गर्नबाट रोक्न हामीसँग अहिले देशभर सुधारहरू छन् ... यद्यपि हामी Google जस्ता एकाधिकारलाई खडा हुन र अनियमित रूपमा कम्पनीहरूलाई उनीहरूको खोज इञ्जिन परिणामहरू छोड्न अनुमति दिन्छौं। हामी कम्पनीहरूसँग काम गर्छौं जहाँ गुगलको एल्गोरिथ्ममा परिवर्तनले मासिक राजस्व सयौं हजारौं डलरमा डोर्याउन सक्छ। यो जमानतमा परेकोमा मलाई कुनै आपत्ति छैन ... तर विनाकारण कसैलाई मात्र ड्रप गर्ने क्षमताले मानिसहरूलाई निकाल्न र व्यवसायलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ!